शुभकामना, रोजा मोन्टेरोको "अस्तित्व थ्रिलर" | वर्तमान साहित्य
भाग्यले साथ दिओस् प्रख्यात स्पेनिश लेखक रोजा मोन्टेरोको सबैभन्दा नयाँ उपन्यास हो। यो प्रकाशन घर द्वारा प्रकाशित गरिएको थियो अल्फागुआरा, अगस्त २,, २०२०। लेखकले उक्त पत्रिकाको लागि अन्तर्वार्तामा व्यक्त गरे जेन्डा यो कथाको बारेमा हो: "... जीवनको डर, र कसरी त्यस डरलाई गुमाउन सिक्ने, कसरी अझ गहन र तीव्र जीवन जिउन"।
कथाले बताउँछ कि दक्षिणी स्पेनको सानो शहरमा नायक पाब्लो र रालुकाको जीवन कसरी मिल्दछ। दुबै जटिल परिस्थितिहरूमा गएका छन् र तिनीहरूको वास्तविकताहरू बिल्कुल फरक छन्, तर कुनै प्रकारले तिनीहरू एक अर्काको पूरक हुनेछन्, किनकि तिनीहरू अन्धकार र प्रकाश हुन्। यस पुस्तकको साथ, लेखकले जीवन, खुशी र विगतको चोटका परिणामहरू प्रतिबिम्बित गर्दछ।
1 गुड लक सारांश (२०२०)
2 राम्रो भाग्य विश्लेषण
2.2 प्रमुख जोडी
2.2.1 पाब्लो हर्नान्डो
2.2.2 रालुका गार्सिया गोन्जालेज
2.3 अन्य पात्रहरू
3 उपन्यासका विचारहरू
4 लेखकको जीवनी जानकारी
4.1 व्यावसायिक अध्ययन
4.2 पत्रकार क्यारियर
4.3 साहित्यिक दौड
4.3.1 रोजा मोन्टेरो द्वारा उपन्यासहरू
सारांश भाग्यले साथ दिओस् (2020)
भाग्यले साथ दिओस्...
पाब्लो हर्नान्डो एक वास्तुकार हो जसलाई ऊ रेलबाट जान्छ मा एक सम्मेलन गर्न दक्षिण स्पेन। विचार मा गहिरो, त्यो प्रतिक्रिया दूरीमा "बिक्रीको लागि" साइन हाल्नुहोस्, ट्र्याकको सामना गर्नु पर्ने पुरानो अपार्टमेन्टको विन्डोमा प्रदर्शित। अचानक, तल जाने निर्णय गर्नुहोस् को मनसाय संग फ्लैट भन्नुहोस्। त्यस समयमा त्यो अप्रत्याशित र असन्तुष्ट निर्णयको कारण अज्ञात छ।
यो अपार्टमेन्ट पोजोनग्रोमा अवस्थित छकेवल एक हजार भन्दा बढी बासिन्दाहरूको साथ एक बेदखत सहर। पहिले, यस शहरले खानी उद्योगलाई समृद्धि प्रदान गर्‍यो, यद्यपि ती राम्रा समयहरूको कुनै पहिचान भएन। जहाँ क्षेत्र पाब्लोले प्रयोग गरेको जीवनशैलीसँग मेल खाँदैन, त्यहाँ उसले शरण लिने निर्णय गर्छ, गहिरो उदासिनतामा डुबेको छ.
अलि अलि गरी, नायकले आफ्नो वातावरणमा चाखलाग्दो पात्रहरू भेट्दछन्। सुरुमा बेवास्ता गरिएको भवनको भाडामा, जस मध्ये यसको छिमेकी, Raluca खडा छ। यस रहस्यमय महिलाले त्यस व्यक्तिको जीवनमा अविश्वसनीय परिवर्तनहरू ल्याउनेछिन्, जसले पहिले उनीहरुका लागि महत्वपूर्ण थिएनन् ती पक्षहरुको कदर गर्न थाल्छ। उनी त्यस्तो उज्यालो हुनेछन् जुन त्यस्तो उदासको अनुहारमा मलाई चाहिन्छ.
विश्लेषण भाग्यले साथ दिओस्
भाग्यले साथ दिओस् एक उपन्यास हो जुन लेखकले वर्णन गरे: “… क अस्तित्व थ्रिलर हत्या बिना र ईन्ग्मास र रहस्यले पूर्ण। यो पोजोनग्रो भन्ने काल्पनिक शहरमा सेट गरिएको छ, र यसको कथानक एक द्वारा वर्णन गरिएको छ सर्वज्ञानी कथावाचक, 300०० भन्दा बढी पृष्ठहरूमा। पुस्तक संगठित छ छोटो अध्याय, जसमा कथा सरल र स्पष्ट बग्छ।
उहाँ 54 XNUMX वर्ष पुरानो वास्तुकार हुनुहुन्छ, केहि अस्वस्थ हुनुहुन्छ, जो यसको औपचारिकता र गोपनीयता द्वारा चित्रण गरिएको छयो विशिष्ट स्वभावको कारण, उहाँसँगको मित्रता कम छ। पाब्लो एक चरणमा पुगेको छ जहाँ तपाईंको विगतका विश्वासहरू, कार्यहरू र निर्णयहरूबारे प्रश्नहरू; जसले सम्भवतः उनको अस्तित्वमा यस्तो क्रान्तिकारी मोड लिन प्रेरित गर्‍यो।
रालुका गार्सिया गोन्जालेज
यो बारेमा छ एक कलाकार पोजोनग्रोबाट, घोडा को चित्र मा चित्रित मा विशेषज्ञ; उनी ओतप्रोत उर्जाको महिला हुन्, एक ताजा, हंसमुख व्यक्तित्वको साथ र मानवता पूर्ण। शान्त जीवन बिताउनुपरे पनि, उनी आफ्नो काल्पनिक विगतको रहस्यले मोहित छिन्, जुन उनले धेरै राम्ररी लुकेकी छिन्; हुनसक्छ शहरका धेरैजना यस्तै परिस्थितिमा छन्।
धेरै माध्यमिक पात्रहरू प्लटमा अन्तर्क्रिया गर्दछन्, जुन नायकहरू मनपर्दछ, धेरै राम्ररी निर्मित छन्। यी बीचमा पाब्लोका धेरै सहकर्मीहरू बाहिर उभिए, जस्तै रेजिना, लौर्डेस र लोला, उनी बेपत्ता भए पछि चिन्ता गर्नेहरू हुन्। थप रूपमा, उनका साथीहरू जर्मन र मटास, जसले मालागामा सम्मेलनमा अनुपस्थित भए पछि पुलिसलाई सूचित गर्दछन्।
अर्कोतिर, यो यस्तै छ नायकको नयाँ छिमेकीहरू, जो सहरमा बस्छन् जुन समयमा रोकियो जस्तो देखिन्छ र जसमा कपटको प्रबलता देखिन्छ। यो मान्छे तिनीहरूले धेरै रहस्यहरू लुकाउँछन्, केहि तुच्छ र सायद हास्यास्पद, तर अरू धेरै धेरै गम्भीर र उदास। सबै जटिल समस्याहरूले घेरिएका छन्, जुन वर्तमान वास्तविकता भन्दा भिन्न छैन।
लेखकले एक उपन्यास सिर्जना गरेको छ जसमा मानिसका राम्रो र नराम्रो कार्यहरू जस्ता विषयहरूमा छलफल गरिन्छ। अरु के छ त, मार्कहरूमा कडा प्रतिबिम्ब गर्न आमन्त्रित गर्दछ जुन बाल्यकालको आघात हुन सक्छ र ती भयानक परिणामहरूले उत्पन्न गर्न सक्दछन्।
याे सबै सकरात्मक दृष्टिकोणबाट, सँधै खराबीमाथि राम्रोको सफलतामा शर्त। तपाईंको परिप्रेक्ष्य परिवर्तन गर्नुहोस्, र जीवनलाई विभिन्न आँखाहरूले हेर्नुहोस्, पृष्ठ पल्टाउनुहोस् र राम्रो भाग्यमा विश्वास गर्नुहोस्।
भाग्यले साथ दिओस् यसले हजारौं पाठकहरूलाई मोहित गर्न सकेको छ; वेबमा, यि of 88% ले उपन्यासलाई सकारात्मक रुपमा मूल्या .्कन गर्छन्। यसको २,2.400०० भन्दा बढी मूल्या्कन प्लेटफर्ममा देखिन्छ अमेजन, average.१ / of को औसतको साथ। यी प्रयोगकर्ताहरू मध्ये%% ले पुस्तकलाई पाँच तारा दिए र पढेर उनीहरूको प्रभाव छोडे। केवल १%% ले कामलाई stars तारा वा कम मूल्या rated्कन गरेको छ।
लेखक यस नवीनतम किस्तको साथ धेरै राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा बहु प्रशंसा प्राप्त भयो। यद्यपि यसपटक उसले आफ्नो अनौंठो शैलीको एक बिट शेड गर्‍यो, उनको रोचक र नवीन रहस्य, साथै उसले निडर पात्रहरू र विषयवस्तुहरू लिएर आफ्ना फ्यानहरूलाई मोहित गर्‍यो।
लेखकको जीवनी जानकारी
फोटोग्राफी © प्याट्रिसिया ए Llaneza
पत्रकार र लेखक रोजा मोन्तेरो उनी म्याड्रिडका स्थानीय हुन्। उनको जन्म बुधवार जनवरी,, १31951१ मा भएको थियो, उहाँका आमा बुबा अमलिया गायो र पास्कुअल मोन्टेरो हुनुहुन्छ। एक नम्र वातावरण मा बाल्यकाल बिताए तापनि, आफ्नो बुद्धि र कल्पनाको लागि धन्यवाद बाहिर उभिए। धेरै धेरै उमेरदेखि उनी पढ्न मन पराउँछिन्, यसको प्रमाण यो हो केवल years बर्षको साथ उनले आफ्नो पहिलो कथा रेखाहरु लेखे.
र 1969, उनी मनोविज्ञानको अध्ययनका लागि म्याड्रिडको कम्पुलेटन्स युनिभर्सिटीमा प्रवेश गरे। एक बर्ष पछि, उनले धेरै स्पेनी अखबारमा काम गर्न थाले: फ्रेम y प्युब्लो। यो काम अनुभव उनको एक मनोविज्ञानी को रूप मा उनको क्यारियर को अनुसरण गर्न छोडिन्छ, त्यसैले उनी आफ्नो क्षेत्र परिवर्तन भयो र चार वर्ष पछि म्याड्रिड स्कूल अफ जर्नलिज्मबाट पत्रकारको रूपमा स्नातक.
उनले स्पेनी अखबारमा स्तम्भकारको रूपमा शुरू गरे देशयसको जगको लगत्तै पछि 1976। त्यहाँ उनले धेरै लेखहरू बनाए, जसले उनलाई अनुमति दियो दुई वर्ष (१ 1980 and० र १ 1981 XNUMX१) सम्पादक-इन-चीफको पदको लागि रहनुहोस् अखबार को आइतवार पूरक को।
यसको चालको क्रम भर अन्तर्वार्तामा विशेषज्ञ छ, एक क्षेत्र जहाँ यो यसको मौलिकता र यसको आफ्नै शैली को लागी अलग छ। उनको श्रेयमा २००० भन्दा बढी कुराकानी विशिष्ट व्यक्तिहरूको साथ गणना गरिन्छ, जस्तै: जुलियो कर्टिजार, इंदिरा गान्धी, रिचर्ड निक्सन, र अन्यमा। त्यहाँ धेरै स्पेनी र ल्याटिन विश्वविद्यालयहरू छन् जुन आफ्नो टेक्नोलोजीलाई एक रोल मोडेलको रूपमा अन्तर्वार्ता लिन आएका छन्।
लेखक उपन्यास संग शुरू भयो हार्टब्रेक का इतिहास (1979)। यो कामले महिलाको स्वायत्तताको बारेमाको विषयवस्तुको कारणले त्यस समयको समाज र साहित्यिक आलोचनालाई चकित पारेको थियो। हाल उसको क्रेडिटमा १ nar कथा, children's बच्चाहरूको किताब र २ कथाहरू छन्। यो यसको पदहरू बीच बाहिर खडा: नरभक्षी छोरी (१ 1997 XNUMX)), जससँग उनले स्पेनिस उपन्यासको लागि प्राइमवेरा पुरस्कार जीते।
रोजा मोन्टेरो द्वारा उपन्यासहरू
लेखको पूर्ण मार्ग: वर्तमान साहित्य » विधाहरू » नोभेला » रोजा मोन्तेरोको शुभकामना
Vicente Nuñez। उनको मृत्युको वार्षिकी। कविताहरु